Älvkarleby | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Uppsala län / Älvkarleby
Degmada Älvkarleby waxaa ku nool 9 000 ruux waxeeyna daris la tahay magaalooyinka Gävle (20 km) iyo Uppsala (80 km). degmadu waxeey ka koobantahay tuulooyinka Älvkarleby, Älvkarleö Bruk, Långsand, Gårdskär, Marma iyo Skutskär.
616 kiilomitir oo laba jibaaran
Gävle 26 kiilomitir
Uppsala 86 kiilomitir
Falun 125 kiilomitir
Stockholm 153 kiilomitir
Guryo kala duwan ayaad ka heli kartaa degmada, waxaadna degi kartaa bartamaha degmada ama geesaheeda. Waxaad jira shirkado badan oo aad ka kireeysan kartid guryaha sida shirkadda guryaha ee degmada Älvkarleby iyo shirkado kale oo ah kuwa gaarka loo leeyahay.
Degmada Älvkarleby waxaa ka jira jaaliyo badan waxaana ka jira fursado badan oo aad kaga faa'ideysan kartid inaad sameysid waxa aad xiiseyneysid. Jaaliyado badan oo ku howlan kubadda cagta, teenis, cayaarta xeegada barafka, cayaarta tartanka mootada iyo kuwa kaloo badan ayaa ka jira degmada.
Bartamaha Skutskärs waxaad ka heleysaa adeega guud ee bulshada oo eey kamid yihiin baniyada, makhaayadaha, dukaamada cuntada iyo farmashiiye. Waxaad kaloo ka heleysaa meelaha tinta lagu jarto oo badan, dukaan lagu gado qalabka isboortiska, dukaamo kabo, shaleemo iyo maktabad aad u wanaagsan. Hadaad jeceshahay hawo qaadashada macaan ee jawiga bannaanka, waxaa jira meelo loo sameeyay in lagu tamashleeyo, meelo lagu mijobaxshado iyo meelo lagu dabbaasho.
Älvboda Friskola waa iskool baraayfat ah oo eey dhigtaan ardayda jira 6-16 sano.
Qofkii raba inuu ugudbo heer jaamacadeed waxaa jira jaamacadda Gävle, jaamacadda Uppsala iyo tan Istockholm oo kulligood masaafo yar u jira degmada.
Ururka dadka kireysta waxuu abaabulaa goob lagu tababarto luqadda. Dad badan ayaa ku kulma kuna shaaheeya meeshaas si eey iskula hadlaan baraktikana ugu sameeyaan luqadda iswiidhishka.
Xaafadda Skuskär waxaa ku yaal rugta caafimaad ee degamada oo leh qeybaha kala duwanoo dhan sida qaabilaad dhakhtareed, goobta xanaanada hooyada iyo ubadka. Rugta caafimaadka ilkaha iyo farmashiiyaha waxeey ku yaallaan bartamaha degmada.
Is gaarsiinta gaadiidka ee degmada Älvkarleby weey fiicanyihiin. Waxaa jira tareen mara magaalooyinka Gävle iyo uppsalaw axuuna istaagaa tuuloyinka Skutskär, Älvkarleby iyo Marma. Waxaad ku badalan kartaa tareenno sii aadaya Stockholm iyo Arlanda oo kugu geeynaya 80 daqiiqo ilaa laba saac. Waxaa jira bas dhaqsi badan ood ukala qaadan kartid degmada Älvkarleby iyo Gävle. Jedwalka basaska iyo kan tareennada waxaad ka heli kartaa www.ul.se. Waxaad kaloo ha heli kartaa websaydkaan qiimaha lagu raaco basaska iyo tareennada kala duwan.
UL (gaadiidka dadweynaha ee gobolka Uppsala)
Gudaha degmadan waxaa laga helaa shaqo-bixiyayaal waaweyn sida Stora Enso iyo Vattenfall, halkan waxaa lagaa helaa xitaa qiyaastii 400 shirkado yar yar ah dhanka laamo ganacsi oo kala duwan. Älvkarleby waxay ku taalaa meel istaratiiji ah dhinaca ganacsiga iyo is-weydaarsiga badeecadaha iyo adeegyada. Iyadoo magaalooyin sida Sandviken, Gävle iyo Uppsala u jiraan masaafo loo safri karo waxaa jira suuq shaqo oo weyn oo la gaari karo.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Älvkarleby